1.Wuxuu ka fogeeyaa urta xun ee dharka lagu qalajiyey gudaha guriga !!
2.Wuxuu ka ilaaliyaa caaryada iyo wasakhda durbaanka mashiinka dharka lagu dhaqo !! (Ka dib 2-3 toddobaad ee isticmaalka maalinlaha ah)
3.Wuxuu ka ilaaliyaa wasakhda tuubada bullaacadaha !!
4.Can waxaa loo isticmaali karaa in ka badan 300 jeer (qiyaastii hal sano).
5. Ka saar sheyga shabakada 300 jeer ka dib una isticmaal beerta ama ubaxyada ubaxa Sababtoo ah waxay muhiim u tahay sawir-qaadista, magnesium waxay nafaqeysaa dhirta!
Adeegsada: Waxaa loo isticmaalay alaab kaabayaal ah oo lagu nadiifiyo, lagu nadiifiyo laguna nadiifiyaa dharka lagu dhaqo cudbiga, dharka linenka ah iyo fiilooyinka macmalka ah.